फोटो हेर्न राखेको श्रीमानको पासपोर्टले गायत्रीको जीवनमै दिलायो यस्तो खुशी! हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > फोटो हेर्न राखेको श्रीमानको पासपोर्टले गायत्रीको जीवनमै दिलायो यस्तो खुशी! हेर्नुहाेस्
admin November 27, 2019 October 31, 2021 जीवनशैली 0
बिहे गरेको एक वर्षमै छोरी जन्मिइन्, सञ्जिना । विस्तारै जिम्मेवारीले थिच्न थाल्यो । न धेरै पढेको न हातमा केही सीप । कमाइको बाटो पहिल्याउन सञ्जिवले विदेश जाने सोच बनाउनुभयो । सुत्केरी श्रीमती र काखे छोरीलाई छाडेर सञ्जिव २०७१ सालमा मलेसियाको जहाज चढ्नु भयो ।
सञ्जिव र गायत्रीकी छाेरी सञ्जिना
तर सन्जिवको पासपोर्ट भने फोटो हेर्न हुन्छ भनेर गायत्रीले लुकाएर राख्नु भएको थियो । आखिरमा त्यही पासपोर्ट आर्थिक सहायता पाउने प्रमाण बन्यो । बिमाबापत ५ लाख रुपैयाँ पाउनुभयो । वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पनि आर्थिक सहायताको लागि सामी सुचनाकेन्द्रले पहल गरिदियो । तर सञ्जिवको मृत्यु नेपालमै भएको कारण बोर्डले कुनै आर्थिक सहायता गर्न नसक्ने बताएपछि ऋणमा डुबेका परिवार निराश बने ।
कामदारको संरक्षण अनि उनका परिवारलाई सहायता गर्ने बोर्डले सञ्जिवको परिवारलाई तत्काल कुनै सहयोग नगर्दा परिवार निराश हुनु स्वाभाविक नै थियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका प्रत्येक कामदारले बोर्डमा १५ सय रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै वैदेशिक रोजगार पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिन्छ । तर नेपालमै ज्यान गएकाले सञ्जिवको परिवारले आर्थिक सहायत पाएन ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली पाँचौं संशोधनले करार अवधिभित्र स्वदेशमै मृत्यु भए पनि आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था गरेपछि गायत्रीले बोर्डबाट पाउने आर्थिक सहायता पनि पाउनुभयो । बोर्डले मंसिर २ गते गायत्रीको परिवारलाई ३ लाख रुपैँया क्षतिपूर्ति दियो । श्रीमान नभए पनि अनुहार हेर्न राखेको फोटोले गायत्री र छोरीलाई आँट दियो ।
हेटौंडा पीपलबोट चोकमा ए’सीड आ’क्र’मण गर्ने भारतीय नागरिक
मैले के बिराए, म गाउँमा जन्मिएको चेली हुँ : अञ्जलि अधिकारी
पानीका पाइपमा पनि भेटियो कोरोना भाइरसको ‘निशान’